Oday 60 Jir ah oo Abaarta ay Xoolihii ka Laysay oo Isku Del-Delay Gobolka Mudug (Dhagayso)
December 14, 2016 – Wararka Inaga soo gaaraya Degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in Nin 60 jir ahaa uu isku dilay Deegaanka Salax, ka dib markii xoolihii uu haystay ay ku la’deen abaaraha dalka ka jira.
Ninkan ayaa la arkay isagoo qori wata, xilli uu ka amba baxaayay Deegaanka Balli Busle oo hoos-tagta Degmada Jariiban, isla-markaana uu go’ ku xirtay bariis iyo bur, isagoona u dhaqaaqay dhulka miyiga ah.
C/qaadir Maxamed Jaamac oo ka mid ah Suxufiyiinta degan Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ninkaasi looga baran inuu hubka uu qaato.
Wariyaha yaa sheegay in dad reer guuraa ah ay ninkaasi weydiiyeen cidda uu qoriga u sito, isla-markaana uu u sheegay in naftiisu uu u wato.
Waxaana uu wariyuhu intaa ku daray in odaygu uu isku buuqay, ka dib markii ay abaartu cagta marisay, wixii xoolo ah ee uu ninkaasi haystay, la arkay markii danbe ninkii odayga ahoo oo geed ka laalaado, rasaasna ay ka muuqato, qorigii uu watayna uu geedka hoos yaalo.
Dhanka kale Maamulka Degmada Jariiban oo xaqiijiyay geerida ninka odayga ah, ayaa waxay magaciisa ku sheegeen inuu ahaa Maxamed Muuse Xuseen, da’diisuna ay ahayd 60 jir xoolo dhaqato ah.
December 14, 2016 tuugahaladilo2015
Diyaaradii Ugu Horeysay Mudo 25-Sano Kadib Xalay ku soo Degtay Garoonka Aadan Cadde (VIDEO) September 24, 2017
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Xariga ka Jaray Dhismaha Cusub ee Wasaaradda Waxbarashada (SAWIRRO) August 16, 2017
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo Maanta Cadeeyay Inuu Isaga Baxay Ururka Al Shabaab (SAWIRRO) August 15, 2017
Su’aalihii Gabadha & Hillery (VIDEO) March 2, 2016
Gaari Qarax Laga soo Buuxiyay oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO) July 24, 2016
Hooyo Soomaaliyeed oo Taksiile ka ah Dalka Australia oo ka Yaabsatay Ragii (VIDEO) May 31, 2016
DAAWO: Weerarkii Ismiidaminta ahaa ee Shalay Lagu Qaaday Hotel Peace (VIDEO)
Soomaalida Xaafadda Islii oo Qatiyaan ka Tagan Kooxda Super Power ee Magaalada Nairobi (VIDEO)
Siyaasiga Faarax Macalin oo Feeray Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya (VIDEO)
Muuse Suudi Yalaxoow oo ka Qosliyay Madaxweynaha, Si Sarbeebana u Karbaashay Qurba Joogta (VIDEO)
Horumarka iyo Dhaqdhaqaaqa Ganacsi ee ka Jira Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Shabaab oo soo Bandhigtay Miinooyin ay u Dhigeen Ciidamada Amisom, Dowladda Iyo Kuwa Puntland (VIDEO)
SHARE – the News
Copyright © 2011-2017 SawirroTV.com All Rights Reserved